नेपालको अव्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी, १ वर्षमा ७० करोडको ठगी - BizKhabar Online
नेपालको अव्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी, १ वर्षमा ७० करोडको ठगी
२०७३ साउन ३० (August 14, 2016) मा प्रकाशित
काठमाडौं । देशको वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रणाली अव्यविस्थत भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार गठिने क्रम पनि बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा म्यानपावर कम्पनी तथा दलालबाट रोजगारीमा जाने कामदारको ६९ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आवमा कामदारको ६९ करोेड ५० लाख ९६ हजार रुपैयाँ बरावरको ठगी भएको छ । जसमध्ये म्यानपावर कम्पनीले ४७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ र व्यक्तिगत रुपमा विकसित मुलुकको रोजगारीमा पठाइदिने आश देखाएर दलालले २२ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
सो अवधिमा कुल २ हजार १ सय ७२ जना कामदार ठगिएका छन् । जसमध्ये म्यानपावर कम्पनीबाट ७ सय र व्यक्तिगत रुपमा १ हजार ४ सय जना कामदार गठिन पुगेका छन् । विभागका अनुसार म्यानपावर कम्पनीले सम्वन्धित देशको रोजगारीमा पठाएर भनेको काम, तलव सुविधा नदिने तथा कामदारसँग नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम लिएर ठग्ने गरेका छन् ।
तर, व्यक्तिगत रुपमा भने बढी तलव तथा विकसित देशको रोजगारीमा पठाइदिने लोभ देखाएर अग्रीम रुपमा पैसा उठाएर भाग्ने तरेको उजुरी आउने गरेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
सो अवधिमा विभागले ५ सय जना कामदारको १० करोड ३६ लाख रुपैयाँ भने उठाइदिएको छ । कतिपयलाई सहमति तथा कतिपयलाई प्रहरी लगाएर कानुन बमोजिम रकम असुल गरिदिएको विभागका एक अधिकारीले बताए । साथै, विभागले सो अवधिमा ३७ करोड रुपैयाँ बरावरको २ सय २६ वटा ठगीलाई भने अदालमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
सैगरी, १४ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई कारावाही गरी १४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गरिएको समेत विभागको भनाइ छ ।
यातायातको सिण्डिकेट फालेका महानिर्देशक भट्टराई श्रम मन्त्रालयमा, हटाउलान त वैदेशिक रोजगारका विकृति ?
नेपाल प्रहरीको रिपोर्टमा युएईको प्रमाणिकरण, कामदारलाई आर्थिक भार, सरकार बेखबर
वैदेशिक रोजगारीमा बढ्यो विकृति, २ महिनामा १८ करोडको ठगी
वैदेशिक रोजगारी जाने कामदारको अनिवार्य बैंक खाता, सोही खातामा रेमिट्यान्स
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सेवाशुल्क ३ गुणाले बढाईँदै
आइतबारबाट अनिश्चितकालिन रुपमा म्यानपावर बन्द, वार्ताबाट समाधान खोजिँदै
माघमा विदेशीए ३१ हजार कामदार, मलेशिया जाने स्वात्तै घटे
असोज १ देखि खाडी मुलुकमा महिला कामदार जान प्रतिबन्ध
‘पैसा र पाखुरा देखाएर सरकार हल्लाउने दिन गए, अब सिण्डिकेट तोडिन्छ’: रुपनारायण भट्टराई
विद्यमान लगानीकर्ताको सन्तुष्टी थप लगानी ल्याउन महत्वपूर्ण रहन्छ
कम खर्चिलो त्रिशुली थ्री १ मा लागत बढाइनु गलत हो
रेमिटेन्स ‘स्याचुरेट’ भइसक्यो, जति लाभ लिनुपर्थ्यो देशले लिइसक्यो
बैंकले अनुमानका आधारमा कर्जा प्रवाह गरेर गल्ती गरे
गभर्नर ज्यू, पहुँचवाला मात्रै हुन जनता ?
बजेटमाथि पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतको टिप्पणी, आकांक्षाहरु बढि बाडियो कार्यान्वयनको आधार छैन
नीति तथा कार्यक्रम माथी डा. महतको टिप्पणी, आकांक्षा जगाउने प्रचारमुखी कुरा मात्र समेटियो